DHAMAAN FAAHFAAHINTA QOLKA KORONTADA - DHIRTA GUDAHA
Haddii aad raadineyso geedka caleenta ah iyo ubax, markaa eu magaciisa lama sugi karo "ishaada ishaada", laakiin macaamiishu waa wax aad u baahan tahay. Ubaxyadu waa kuwo yaryar oo aan qallafsaneyn, laakiin waxay weli noqon kartaa wax aad u weyn beertaada ama aqalkaaga "aqalka dhirta". Waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo xalka ugu dambeeya si faahfaahsan. Sida loo xanaaneeyo eu magaciisa, sida si habboon loo beero iyo u faafiyo, waxaad ku baran doontaa adigoo akhrinaya maqaalkan ilaa dhamaadka.
Noocyada qolalka qolalka
Inta badan noocyada geedka tani (iyo waxaa jira qiyaastii 140) waxaa loogu talagalay in lagu beero dhul furan, kaliya labo ka mid ah ayaa ku habboon taranta gudaha. Dabcan, hadda waxaan loola jeedaa Japanese euonymus iyo Abaalmarinta Codadkakuwaas oo inta badan laga helo guryaha.
Kala duwanaanshaha ugu horeeya waxaa lagu kala saaraa caleemaha cagaaran ee cagaaran ee qaabka calyada ee cidhiidhi ah leh geesaha cadayna leh. Dhererkooda waxay ku kala duwan yihiin 3 illaa 8 cm, iyo ubaxadu waxay u dhigmaan 1 cm (mid kasta oo ka mid ah inflorescence 10 ilaa 30 gogo '). Midabka ubaxa waa cagaar-cagaaran, sanduuqyada casaanyada ama casaanku waxay u dhaqmaan sida miraha.
Abaabul magac leh (magaca kale waa eu magaciisa Forchun) waa geed dhererkiisu yahay 30-60 cm, iyadoo laamaha la balaarinayo ilaa saddex mitir dhererka. In node ee laamihii waxay qaadan kartaa xididka. Caleemaha waa leathery, yaryar, waxay leeyihiin midab cagaaran oo madow iyo qaabka ovoid. Baaxadda ay u dhaxeyso 2 ilaa 6 cm.
Ma taqaanaa? Nasiib daro dhammaan noocyada eu magaciisa waa mid aad u sun ah, laakiin eelotus iyo eu magaciisa yurub ayaa ah muhiimada ugu weyn ee la taaban karo, tan iyo jilitaankooda iyo afkoda waxa ku jira sheyga.
Xeerarka ilaalinta eu magaciisa ee xaaladaha qolka
Warshad isku mid ah oo ku sii kordhaysa xaalado kala duwan waxay u baahan tahay fiiro gaar ah. Sidaa darteed, daryeelka qolka eu magaciisa waa ka duwan yahay daryeelka ubaxa beerta.
Xaaladda iftiinka, warshadani waa mid aan la qabin oo si wanaagsan u kora labadaba iftiinka iyo hooska qayb ahaan, inkastoo ikhtiyaarka koowaad uu yahay mid la doorbido. Inta badan qolalka qolalka qolalka leh waxay u baahan yihiin iftiin fiican sanadka oo dhan, taas oo ah sababta aysan dhamaan noocyada kala duwan u dareemi karaan dhinaca woqooyiga ee guryaha ama guriga.
Qorraxda tooska ah waxay faa'iido u leedahay magaca "euonym", laakiin waxaa fiican in ay ku dhacaan caleemaha dhirta oo kaliya subaxa ama fiidkii. Si kastaba ha noqotee, noocyada leh caleemo kala duwan oo ka soo baxa dhinaca waqooyiga, liddi ku ah, waxay lumin karaan midabkooda dabiiciga ah, taas oo ah mid aan loo baahnayn oo ka iman karta aragtida heesaha.
Xilliga qaboobaha, ma qarin kartid cadadka qoraxda, maxaa yeelay qorraxdu si toos ah uma laha saameyn isku mid ah sida xagaaga.
Muuqaal kale oo muhiim ah oo ku saabsan daryeelka dhirta waa heerkulka gudaha. Xilliga jiilaalka, way fududahay in la abuuro xaalado heerkulka ku habboon (heerkulku waa inaanu kor u kicin + 24-25 ° C), halka xilliga jiilaalka tilmaamayaasha heerkulka la yareeyey 8-10 ° C. Jiilaalka heerkul sarreeya wuxuu halis u yahay eu magaciisa oo lumay caleemo.
Waqtigaan, waxaad geyn kartaa balakoonka balakoonka kulul, inkastoo aadan u oggolaanin heerkulka aad u hooseeya. Xilliga jiilaalka eu magaciisa la yiraahdo (ilaa 3 sano) xaaladaha beertu waxay bixisaa hoyga dhirta oo leh dhir laamo ah ama caleenta qalalan, iyo si looga hortago xididada dhirta qaangaarka ah ee barafka, balka ama caleemaha la keeno asaasahooda.
Ma taqaanaa? Waxaa jira dhowr halyo oo la xidhiidha eu magaciisa. Midka koowaad wuxuu sheegayaa in xayawaanku uu kor u qaaday geedkii sunta ah sababtoo ah cadowgooda dadka, laakiin markii dambe ka qoomameeyay tallaabooyinkeeda oo ay ka dhigtay dhirta dawo. Ka dib markaa, iyadu waxay isu beddeshay shimbir yar oo cawl ah - dhakad (sunta berry ma saameyn). Sida laga soo xigtay halyeeygii labaad, eu magaciisa ayaa u muuqday sababtoo ah cadhada ilaaheeyda Flora, oo lumisay laba dahab ah - qoryo iyo caleemo. Ma aysan bilaabin in ay raadiso, laakiin waxay ku soo noqotey geed caan ah: ubaxa waxay u egyihiin sida cawska, iyo berry waxay u egyihiin hilqad.
Shuruudaha ka kooban ee ciidda iyo bacriminta
Ma aha sir ah in euonymus qolka uu ka duwan yahay qaybta beerta marka la eego beerashada iyo daryeelka, laakiin sida dhulka, labada noocba waxay leeyihiin doorashooyin isku mid ah. Wixii kobcinta buuxda iyo horumarka warshadani waa isku dhafan oo ciid ah iyo dhul daaqsimeed caadi ah oo ah saamiga 1: 3. Sida ugu fiican, heerka pH waa inuusan noqon mid ka sarreeya ama ka yar yahay 6, iyo asiidhku waa inuu ahaado dhexdhexaad.
Waa muhiim! Xannaha yaryar ee clayey ee ciidda loo baahan yahay in la isticmaalo maaha doorka ugu fiican ee loo yaqaan 'euonymus'.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto in dhirta si aad u hesho farxad leh, muuqaal qurux badan iyo fruiting badan ka dib markii laga beerto a euonymus, ka dib, marka lagu daro habka saxda ah ee ciidda, waxay sidoo kale u baahan tahay bacriminta saxda ah, kaas oo lagu dabaqay ciidda dhowr jeer sanadkiiba.
Waxaa si gaar ah muhiim u ah in la bacrimiyo eu magaciisa guga xilliga guga ubaxa si firfircoon u sameysma. Xaaladdan oo kale, ikhtiyaarka ugu fiican ee quudinta waa digada, horey loogu qasi jiray biyaha ee saamiga 1:10. Beddel ahaan, waxaad isticmaali kartaa shimbir shimbir ah, laakiin kaliya dareenka faleebada waa in la yareeyo nuska.
Wixii dhirta indoorku waxay noqon doontaa Bacriminta macdanta oo ku filan oo adag, kuwaas oo lagu iibiyo foomka la dhamaystiray. Waxa la sameeyaa qiyaastii hal mar bishii, iyo haddii ciidda dheriga lagu gartaa aysidhka sare, ka dibna waxaa lagu rusheeyaa lime. Xilliga jiilaalka, dhirta aan bacrimiyey, maadaama ay tahay nasasho oo uma baahna quudin joogto ah.
Malaha mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee daryeelidda warshad gaar ah waa saxnimada waraabinta. Xaaladda qolalka qolalka, nidaamkani waxaa lagu sameeyaa iyadoo la isticmaalayo biyo diirran oo leh qiyaasta ugu yar ee cusbada lagu kala diri karo. Guga iyo xagaaga, waraabinta waa in ay ku filan tahay, laakiin ha u oggolaanin qoyaan joogta ah nidaamka xididka.
Xilliga dayrta iyo xilliga qaboobaha, eu magaciisa ma aha sidaas daraadeed, iyo tirada biyuhu waa la yarayn karaa. Geedaha ku jira balakoonka qallaji ee heerkul ah 5 ilaa 10 ° C, waxaad ku adkaan kartaa biyo. Inkastoo aysan ka qaybqaamin caleemaha, waxay ku jiraan xaalad nasasho buuxda ah.
Marka lagu daro waraabinta, kaalin muhiim ah ayaa lagu ciyaaro qiyaasta qoyaanka ee qolka. Qaar ka mid ah beeraleyda ubaxa qaarkood ayaa sheeganaya in tusaaluhu uusan macno gaar ah lahayn, oo kaliya buufinta ayaa faa'iido leh. Si kastaba ha noqotee, haddii hawada qolka uu yahay mid aad u qallalan, heerkulkuna aad ayuu u sarreeyaa, tani waxay sababi kartaa cirridka curyaaminta.
Waa caleemaha caleenta ah ee ka masuul ah uumiga qadar yar oo ah qoyaan by geedka, taas oo ay u mahadcelinayso hawada qalalan ee meelaha bannaan. Si aad uga qaadato boodhka magaceeda, khubarada ayaa waqti kugula taliya in ay qubeystaan.
Ma aha oo kaliya noocyada beerta, laakiin sidoo kale dhirta Japanese indoor u baahan tahay manjooyin xilliyeed ee caleemaha. Sidaa daraadeed, si loo soosaaro eu magaciisa, waa in la gooyaa guga, inta lagu jiro xilliga koraya ee dhan. Maqsinnada dhirta ayaa ah mid fudud oo jilicsan, markaa waa la siin karaa qaab kasta (tusaale ahaan, si loo sameeyo foomka bonsai).
Sanadka oo dhan, nadiifinta manjooyin waa la samayn karaa (sida caleemaha of euonymus qalalan). Sidoo kale in laga saaro laamaha daciifka ah ee awoodda ka qaata geedka.
Waa muhiim! Guga hore, caleemaha dhalinyarada ah waxay xiri karaan, taas oo kaliya kor u qaadi doonta jardiinada iyo gacan ka geysashada dhismaha cufan cufan.
Waxaad ku kori kartaa warshad si aad u dhadhamiso, adigoo siinaya qaab kasta oo ku dhow. Kala duwanaanshaha ugu badan ee qolka qolalka qolka waa qoryo, marka laamood badani ay ka baxaan xididka (inta badan waxaa jira, dhumucda iyo quruxda badan ee taajku ka soo baxayo).
Waxa kale oo suurtogal ah in lagu beero geed geedka asaasiga ah: jirridda ayaa ka soo baxaysa dhinaca hoose, sareeysana waxaa la buuxiyaa taaj qaro weyn, taas oo lagu helo natiijo ka timaadda gaaban oo sax ah oo si joogta ah u qulqulaya si ay u kiciyaan burooyinkooda hurda. Haddii aad isku daydo, waxaad xitaa kori kartaa bonsai laga bilaabo eu magaciisa.
Wixii beerta waayo-aragnimo leh ma aha qarsoodi in eu magaciisu yahay sun, taas oo macnaheedu yahay in taxadar gaar ah la eego marka uu sii kordhayo. Xaqiiqadu, khatarta waxaa lagu magacaabaa oo keliya miraha, xitaa kadibna carruurta iyo xayawaanka oo kaliya, sida qof weyn wuxuu u baahan yahay inuu cuno miro badan oo loogu talagalay sunta culus.
Dhirta dhalinyarada (ilaa 3-4 sano) waxay u baahan yihiin in la soo celiyo sannad walba, laakiin eu magaciisa dadka waawayn waa ku filan inay beddelaan meesha koritaanka labadii ama saddexdii sanoba mar (haddii aysan jirin baahi loo muujiyay, ka dibna waxay noqon kartaa mid aad u yar).
Nidaamka bedelka waxaa lagu sameeyaa habka soo socda: lakabka biraha ah ayaa lagu shubay hoose ee dusha cusub ee la diyaariyay (waa inaanay ka weyneyn mid hore), ka dibna dhulka ayaa la buuxiyaa. Waxaa ugu wanaagsan in lagu beddelo isku dar ah cawska iyo dhulalka caleenta ah, oo lagu qaso ciid qalafsan iyo humus (oo ah saamiga 1: 2: 1: 1).
Waa in aynaan hilmaamin in ciidda loogu talagalay eu magaciisu yahay inay iftiimiso oo ay u weheliso nafaqeeyayaalka yar yar. Haddii aad go'aansato inaad beerista dhirta dhulka ku furto, waxaa ugu wanaagsan in la sameeyo beer ku-tallaalid guga.
Ma taqaanaa? Euonymus si guul leh ayaa loo isticmaalaa daawada, iyo walxaha ceeriin ee daawada ma aha oo kaliya jilicsan, laakiin sidoo kale caleemo, laamo iyo xitaa abuur. Warshadani waxay leedahay cayayaanka, calool jilciye, antimicrobial, antihelminthic, durayo iyo daaweyn antiparasitic.
Dib u dhalashada guriga ee guriga
Inta badan, taranka Euonymus wuxuu ku dhacaa hab daaqsinka ah (gooynta cagaaran ama kala qaybinta baadiyaha), laakiin marka laga hadlayo dhirta gudaha ah, dhalmada abuurka ayaa badanaa la kulma.
Xaaladaha badankood, noocyada koobi ee caanka ah eu magaciisa ayaa ku dhalin kara qaybinta baadiyaha. Tani waxay gacan ka geysataa sarrifka iyo gogosha jiifka ee nidaamka asaasiga ah, taas oo siinaysa koboc dhaqaale sanad walba. Dhammaan wixii lagaa rabo waa inaad si taxadar leh u kala soocisaan caleemaha yar yar ee hooyada keynta ah (oo ay weheliso qeyb ka mid ah rizoodhka), ka dibna ku darso 2/3 dhererka kuna beer iyaga dheri kale. Nidaamkani gebi ahaanba xanuun maaha eu magaciisa.
Markaad jarjareysid, waxaad u baahan tahay inaad doorato gooyn dina ah oo aan ka badnayn 6-10 oo leh hal internode. Ka dib, in cut waa in lagu rusheeyey budada phytohormone gaar ah iyo gelin guntooda ee isku dar ah peat-ciid. Waraabinta caleemaha oo ay ku daboolaan filim, waa inaad sugto 2-2.5 bilood, iyo sida ugu dhakhsaha badan ee ay xididada u qaataan, waxaa lagu bedeli karaa meel joogto ah.
Waa muhiim! Gooyn fiican ee qeybtii hore ee xagaaga.
Inta badan eu magaciisa qolka waxaa lagu faafiyaa abuurka, kuwaas oo lagu sameeyay miro-sanduuqyada ka dib dhirta ubax. Seddex bilood gudahood waxay u egtahay heerkulbeeg ah illaa +3 ° C. Waqtigani waa ku filan inta badan abuurka si ay u qariyaan jaakad abuurka. Ka dib markii taas, waxaa laga nadiifiyaa prisemyannikov iyo ku meeleeyay xal of potassium permanganate (0.5%).
Abuurtaan abuurka waa in ay ku jiraan grooves gacmeed (qiyaastii 2 cm), iyo 2-3 toddobaad kadib waxaad arki doontaa caleemaha ugu horeeya.
Cudurada iyo cayayaanka qolalka qolalka, sida loo wajaho
Badanaa, euonymus qolka waxaa loo hanjabaa caarada caarada, midabka, iyo gaashaan. Caarada caarada ayaa si muuqata loo arki karin caleemaha, waxaana la ogaadaa oo kaliya marka caleemuhu huraan noqdaan oo ay dhacaan. Intaa waxaa dheer, calaamad muujinaysa joogitaanka ee shillinta waa curvature ee caleemaha yar yar.
In la ogaado suurtogalnimada dhibaatadaas, waa lagama maarmaan in la ilaaliyo qoyaanka sare ee qolka (gaar ahaan maalmaha kulul), mararka qaar maydhaan caleemaha hoos diirran, waxaad xitaa isticmaali kartaa shaambo ama saabuun. Xaaladaha khatarta ah, waxaad u baahnaan doontaa inaad caawimaad ka geysatid acaricides, laakiin waqti ka dib, cayayaanka ayaa u adkaysta iyaga.
Waxay bixisaa dhib badan iyo gaashaan (waxaa jira xitaa noocyo kala duwan - gaashaan dhoobo ah). Kadib "kaadida" waraaqda, waxay ka baxaysaa meeshii jaalaha ah, taas oo kor u kacda waqti ka dibna uumiga muuqaalka geedka. Dagaalka ka dhanka ah wuxuu caawin doonaa sunta cayayaanka ee nidaamsan - Aktara ama Konfidor, iyo sidoo kale in laga saaro cayayaanka ka soo baxa caleenta ama suufka.
Sida qiyaasta ka hortag ah ee warshadda saaro saabuun xumbo oo u dhaaf saacad. Ka dib markaa, waxaad u baahan tahay inaad si fiican u dhaqdo caleemaha hoos diirran.
Waa muhiim! Kadib qaabsocodka, eu magaciisa waa in looga tagaa musqusha dhowr saacadood ka badan.
Tani maaha in aad si buuxda u ilaalin karto euormuska cudurada xayawaanka, hase yeeshee daryeel ku haboon waxaad yareyn kartaa khatarta cayayaanka.